Mpanamboatra sy mpamatsy boaty Toolkit China Turck | YSXF
Pit Posse - Fitaovana fitehirizana ny làlambe alimina alim-baravarana miaraka amin'ny hidy ho an'ny kamiao Utv Razainao - Tsy tantera-drano - Maharitra - Azo ampiarahina - Drafitra goavam-be diamondra - mora entina - mora miakatra - mamarana mora
MAZAVA HO AN'NY FIOMPIANA MORA SY NY fitondrana, Ity boaty fitaovana ity dia namboarina tamina fanamboarana matanjaka nefa maivana hapetraka eo alohan'ireo zotram-pitaovana A-Frame. Mora ny mivory, mety tsara entina avy amin'ny toerana iray mankany amin'ny toerana hafa raha ilaina. Vahaolana lehibe amin'ny fitehirizana ireo fitaovanao na entana ao amin'ny garainao ary manampy toerana fitahirizana bebe kokoa amin'ny tranofiara mihidy anao.
✅ DURABLE DIAMOND RUGGED DESIGN - Namboarina tamin'ny alim-bolo vita amin'ny alim-bolo vita amin'ny kofehy feno vy, ho fampiasana mafy. Ny boaty fanangonam-bokatra dia hiaro ny entanao amin'ny toetr'andro ratsy indrindra, ary ny fananganana takelaka diamondra dia hitazona ny endriny mandritra ny taona maro. Ny boaty azo hidiana dia hidina ambany ambany, paosy kodiarana, fehy, boaty fampiasa ary fitaovana ilaina hafa.
✅ MITADY AZO AZO AMIN'NY FOMBA FAMPIASA- Ny savily lalina dia mamela ny tampony hisokatra na dia miorina mivantana manohitra ny tranofiaran-tsarimihetsika aza ianao, ary mampahazo aina azy ny manampy na manala zavatra raha vao miraikitra amin'ny tranofiara. Manafoana ny filàna ny fanapahana ny boaty ho an'ny fitaovana avy amin'ny lela hidirana amin'ny fitaovanao.
✅ EXTRA STORAGE SPACE AND ACCESSIBILITY- mitazona fitaovana sy fananana fanampiny miaraka aminao. Ny fanananao dia hifanentana soa aman-tsara noho ny hidy mitazona ny boaty mihidy rehefa ento eo amin'ny tranofiara. Azonao atao ny mandray izay ilainao nefa tsy manahy momba ny habakabaka. Aza adino mihitsy ny fitaovana iray amin'ny fitazonana ny fitaovanao rehetra voalamina sy arovana ao anaty boaty fitahirizana lela aluminium.
✅ NY FAHASALAMANAO NO FAHAMARINANA # 1- Ny boaty fanamafisana ny làlan-tsarimihetsika Pit Posse ho an'ny tranofiara dia natao hamaliana ny filanao fitahirizana. Matoky izahay fa ho tianao ny boaty fitaovanay. Raha tsy afa-po 100% ianao dia hanome anao vola feno na fifanakalozana maimaimpoana, tsy misy fanontaniana apetraka. Manolotra fiantohana 5 taona ho an'ny mpanamboatra izahay, mifandraisa aminay ary hanampy anay izahay.
Ny Pit Posse Trailer Tongue Box dia hiantoka ny fanananao rehefa mijery tsara!
Namboarina tamin'ny alim-pito tsy misy fotony miaraka amina seams feno, ny boaty fananganana toetr'andro dia tsara amin'ny fitaterana ny fitaovanao sy ny kojakojanao avy amin'ny toerana iray mankany amin'ny toerana hafa, na mitahiry ny fitaovanao ao amin'ny garazy mitazona azy ireo ho voaro sy vonona amin'ny dia manaraka.
✔️ 34 "amin'ny. Malalaka any aoriana, 17.5 eo alohany, 18 ny haavony, 20,5 ny halaliny, milanja 22 pounds
✔️ Taper natao ho an'ny aerodynamika miaraka amina strut offset ho an'ny fandidiana malefaka sy fidirana mora
✔️ Ny fananganana takelaka diamondra dia hita ho tsara mandritra ny taona maro
✔️ Ny savily mihitsoka lalina dia mamela ny tampony hisokatra na dia miorina tsara mifanohitra amin'ny tranofiara tanteraka aza ianao
Alefaso mora foana ny fitaovanao sy ny fitaovanao ao anaty boaty maharitra eo amin'ny lelan'ny tranofiarananao mba hidirana mora foana nefa tsy mila manokatra ny tranofiara na mitahiry ny fitaovanao any amin'ny fipetrahan'ny kamio anao.
MANDEHA MBA MIANDAOTA AN'ANDRIAMANITRA INDRINDRA ARY MBA HAHAFINARITRA NY TOERAN'NY FITONDRANA EXTRA AMIN'NY VOLA LALANA!
Previous: Vokatra Aluminium Indostrialy Sakafo Sakafo
Manaraka: Fitaovana fanaovana firaka aluminium
Ny MaxxHaul Trailer Tongue Box dia natao hiakatra amin'ny tranofiara misy sarany A-Tongue mba hanomezana tahiry fanampiny ho an'ny fitaovanao, fitaovam-pilasiana, rojo fiarovana, fehy, fonosana fiara, kojakoja ivelany, tariby, kojakoja fampiasa, tariby, paosy kodiarana ary maro hafa . Aza adino mihitsy ny fitaovana na fitaovana rehefa mila azy ireo ianao! - Vita avy amin'ny fitaovana alim-bolo maivana sy mahazaka harafesina miaraka amina fanamboarana seam vita amin'ny lasitra ary famaranana palitao henjana - Takelaka diamondra pa ...